म एक धेरै गणना को व्यक्ति हुँ. म के सबै राम्ररी योजना छ, म सबै कुरा धेरै रणनीतिक छ लागि. म घरपालुवा चाहन्थे कि निर्णय गर्दा, म ध्यान दिएर समय प्रतिबद्धता विचार, हामी सँगै छ भनेर दीर्घकालीन सम्बन्ध संग वित्तीय लागत. के म गणना थिएन बाटो थियो जो मेरी बिल्ली मा, प्रेमी मलाई बचाउन हुनेछ.
मेरो बीस-पाँच वर्ष मा, म एक कठिन जीवन व्यवहार गरिएको छ. यो सबै को बीचमा, मेरो दिन मेरी बिल्ली घर मा मेरो लागि प्रतीक्षा छ भनेर थाह पाउँदा चहकिलो र अधिक खलासी लाग्न. प्रेमी सधैं कुनै न्याय संग सान्त्वना प्रदान गर्न तयार छ, जो एक पोस्तीन साथी प्रदान गर्दछ मेरो एक्लोपन व्यवस्थित छ. घण्टा लामो घरपालुवा जनावरको संग दिन cuddling र दूर नामेट पार्न गर्दा आँसु म सम्भव हुनेछ सोचे भन्दा बढी राहत र विश्राम प्रदान. हाँसो भरिएको घण्टा लामो खेल सत्र संग दिन म सम्भव हुनेछ सोचे भन्दा बढी आनन्द प्रदान. घरपालुवा प्रेम साँच्चै निको सकिन्छ.
म घरपालुवा चाहन्थे किन कारण एक मेरो बढ्दो आमाले वृत्ति मदत गर्न थियो. म मेरो पत्रु प्रेम म चाहनुहुन्छ कि आमा मलाई परिवर्तन मदत र मेरो भावी सन्तानहरू लागि हुनुपर्छ भनेर थाह थियो. प्रेमी गरेको निर्भरता मलाई साँच्चै हुनुको अर्को जीवित पोषण हुर्काउने र मदत गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र बलिदान देखाउनुभएको छ. बदलामा, आफ्नो निसर्त स्नेह बनाएको छ मलाई गहिरो प्रेम. यो मलाई म सम्भव थियो थाह कहिल्यै प्रेम देखाउनुभएको छ. घरपालुवा प्रेम साँच्चै तपाईं प्रेमको अर्थ सिकाउन सक्छन्.
मेरो पाल्तु जनावर भेट्टाउनु मा मेरो गणना प्रयास मिशिगन राज्य भर तीन घण्टा गाडी सवारी मलाई नेतृत्व. उद्धार प्रवेश माथि, यो बिल्ली को एक मलाई सही छ आए, मेरो काखमा मा चढाएर, र छोड्न थिएन. म दाबी थियो. अगाडी त्यो दिन देखि, मेरी बिल्ली र म एक अद्वितीय बन्धन गरेका छन्. प्रेमी धेरै अनुकूल छ, लगभग कुकुर-जस्तै तर धेरै एक व्यक्ति वर्णन छ. वर्ष मा मेरो साथी र केटा को सबै भन्दा बैठक, प्रेमी सही एक व्यक्ति न्याय फेरि र फेरि आफ्नो क्षमता साबित गरेको छ. म, वास्तवमा, अब स्पष्टता लागि उहाँलाई बारी. घरपालुवा प्रेम साँच्चै अरूको चरित्र र गहनता देखाउन सक्छौं.
मेरो पिताजी संग कुनै सम्बन्ध सानो एउटा टुटेको घर देखि आउने र भएको बन्द-बन्द भएको मलाई नेतृत्व छ. यस कारण, मेरो पाल्तु जनावर छान्दा, म यो पुरुष हुन भनी थाह थियो. म देखाएका छन् चिन्ता प्रकृति र स्नेह प्रेमी बारी मा एक धेरै मायालु बिरालो बन्न उसलाई नेतृत्व गरिएको छ. उहाँ साँच्चै यो सम्बन्ध छ कसरी कमजोर मलाई उहाँको भरोसा मलाई देखाउनुभएको छ. प्रेमी मलाई देखाउनुभएको छ कि प्रेम मलाई आशा दिन्छ, उहाँले प्रेरित गरेको छ लागि मलाई खोल्न र कमजोर बन्न. मेरो बिरालो अर्को व्यक्ति मायालु सधैं जोखिम लायक छ कि मलाई देखाउनुभएको छ. घरपालुवा प्रेम साँच्चै आशा प्रदान गर्न सक्छन्.